Ny olona manantena ny fiarovan’Andriamanitra dia olona sahy manambara Azy sy kristianina miantehatra Aminy – FJKM Ambavahadimitafo Ny olona manantena ny fiarovan’Andriamanitra dia olona sahy manambara Azy sy kristianina miantehatra Aminy |
Ny olona manantena ny fiarovan’Andriamanitra dia olona sahy manambara Azy sy kristianina miantehatra Aminy
Publié le 16 septembre 2013 à 09:09
Alahady faha telo amin’ny volana septambra 2013, anatin’ny lohahevitra hoe « Manantena fiarovana ny mino« .
Ny mpitandrina miza-draharaha vaovao, ramatoa Andrianavalona Sitraka no nitondra ny hafatr’Andriamanitra, izay nalaina avy ao amin’ny Lioka 12 : 8-12 :
8Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia heken’ny Zanak’olona kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra; 9Fa izay mandà Ahy eo anatrehan’ny olona, dia holavina kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra. 10Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. 11Ary raha mitondra anareo ho ao amin’ny synagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo, na izay holazainareo; 12fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin’izany ora izany izay mety holazainareo.